आश्मा त्यस्ती राम्री छे, माया बसिहाल्यो नि: संयम पुरी | News Filmy
आश्मा त्यस्ती राम्री छे, माया बसिहाल्यो नि: संयम पुरी
सय वर्षको बलिउडमा कपुर खानदानको सक्रियता विगत चार पुस्तादेखि जारी छ। नेपाली रजतपटमा पनि पछिल्लो समय सिनेमामा आफ्ना अभिभावकको पदचिह्न पछ्याउनेहरू देखिन थालेका छन्। फिल्म निर्देशक नारायण पुरीका छोरा संयम पुरी यसका प्रतिनिधि पात्र हुन्।
‘आगो’, ‘दोमन’, ‘आफ्नो मान्छे’ जस्ता सिनेमामा बालकलाकार भएर आफ्ना बाबुको बाटोमा हिँडेका संयम २०६९ सालमा रिलिज भएको सिनेमा ‘सायद’को बक्सअफिस धमाकाले एकाएक नेपाली सिनेनगरीमा चर्चित हुन पुगे। नेपाली रजतपटमा पछिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने संयम करिब दुई वर्षपछि आगामी शुक्रबार ‘पुन्टे परेड’ सिनेमाबाट फेरि पर्दामा देखिँदैछन् र यसै सन्दर्भमा रहेर संयमलले सेतोपाटी डटकमका अशेष अधिकारीसँग ‘पुन्टे परेड’ र आफ्ना व्यक्तिगत जीवनका कुरा गरेका छन्।
दोस्रो सिनेमा आउन त समय लाग्यो नि?
समय लाग्यो भन्दा पनि हाम्रो पुस्तालाई सुहाउने, हाम्रो उमेरकालाई सुहाउने, हामीले भोगेका कुराहरू भएको सिनेमा गर्ने इच्छा थियो। त्यसलाई कुर्दाकुर्दा भनुम् न, अलिकति समय लाग्यो। बीचबीचमा सिनेमाका कुराहरू पनि नआएका होइनन् तर राम्रो कथामा राम्रो टिमसँग काम गरौं भनेर हो।
‘पुन्टे परेड’मा के छ त्यस्तो जसका कारण तपाईँ यो सिनेमा गर्न तयार हुनु भयो?
मुख्य रूपमा सिनेमामा उठाइएको किशोर मनोविज्ञानको कुराले आकर्षित गरेको हो। ‘अपवाद’ सिनेमा हेरेपछि मलाई सुवास कोइरालाको काम मनपर्‍यो। मैले त्यस किसिमको नेपाली सिनेमा हेरेको थिइन। त्यसले पनि मलाई सुवास कोइरालासँग काम गर्ने लोभ थियो तर मुख्य रूपमा सिनेमाको प्लट, त्यसमा रहेको किशोर मनोविज्ञान र लिड रोल गर्ने रहरले पनि ‘पुन्टे परेड’ सँग जोडिएको हुँ।
सिनेमामा आफूभन्दा बढी उमेरकी नायिकासँग पर्दामा रोमान्स गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो?
सिनेमामा रोमान्सभन्दा पनि किशोर अवस्थामा आफूलाई पढाउने म्यामप्रति आकर्षित भएर एकतर्फी माया गर्ने किशोर मनोविज्ञानको कथा छ। त्यो रोमान्स त्यही किशोरको कल्पनाको रोमान्स मात्र हो।
आफूले सिनेमामा देखेको बलियो पक्ष के हो ?
हाम्रो समाजमा टिनएजमा एउटा किशोरकिशोरीले कसरी सोच्छ। उनीहरु र उनका बाबुआमाको सोचाइको द्वन्द्व, तिनले दिने सामाजिक सन्देश र त्यसमा गरिएको प्रस्तुति नै हो।
सिनेमा बनेपछि हेर्नुभयो होला। तर, सिनेमा सुन्दा एउटा किसिमको र बनिसक्दा अर्को किसिमको बन्ने गर्ने गरेको छ। सिनेमा कस्तो बनेको छ?
यो एउटा कोशिश हो। मलाई मन परेको कुरा अरूलाई मन नपर्न पनि सक्छ। प्राविधिक रूपमा केही सम्झौता गरियो होला तर, एउटा दर्शकका रूपमा हेर्दा सिनेमा सुनेभन्दा राम्रो बनेको छ।
आष्मासँगको प्रेम सम्बन्ध साँचो हो?
हो। यसमा लुकाउनुपर्ने केही छैन। उमेरमा मान्छेले आफूलाई मिल्ने कोही साथी खोज्दो रहेछ। आष्मा (डिसी) मा मैले ती कुराहरू पाएँ। हामीबीच धेरै कुराहरू मिलेका छन्।
प्रेम कसरी सुरू भयो?
पहिलोपटक उनीसँग उनले चलाउने गरेको टेलिभिजन सोका दौरान भेट भएको थियो। फेरि हामी दुवैको फिल्ड एउटै भएकाले नजिकिने मौका धेरै पाइयो।
के मनपर्यो त उनको?
(हाँस्दै…) मान्छे त्यस्तो राम्री छ, मिलनसार छ, मज्जाको छ। बानी ब्यहोरा राम्रो छ।
सिनेमा क्षेत्रमा आफ्नो ड्याडी हुनुको सजिलो र गाह्रो के हुने रैछ?
सजिलो हुने कुरामा कुनै शंका छैन। सिनेमाका अग्रज मानिसहरूबाट हौसला पाउँछु। तर कत्ति ठाउँमा बाउको कारणले गर्दा हो भन्ने जस्ता कुरा सुन्नुपर्छ। तर, भन्नेले भन्दै गर्छन्। सबैलाई बोली फर्काएर केही हुनेवाला पनि छैन। जे भन्नु हुन्छ सुन्छु मात्र। राम्रो कुरा गर्नुभयो भने राम्रो तरिकाले लिन्छु। नराम्रो भन्नु भयो भने मसँगै नेगेटिभिटी रहेछ भनेर त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्छु। म कुरा गरेर भन्दा पनि काम गरेर आफूलाई सावित गर्न चाहन्छु।
आगामी योजना के छ?
यो वर्ष ‘आभास’ र ‘लवसव’ गरी दुई सिनेमा रिलिज हुँदैंछ। मुख्य त मेरो पढाइ रोकिरहेको छ, त्यसलाई पूरा गर्छु। मलाई सिनेमामा अभिनेताका रूपमा भन्दा पनि अन्य पाटोहरू पनि पढेर सिकेर आउनु छ। सभार : सेतोपाटी डटकम
प्रोफाइल तस्बिर : एक कार्यक्रममा संगै पुगेका बेला आश्मा सहित संयमको पुरै परिवार । तस्बिरको दाँयादेखि बाँया जादा बहिनी संयुक्ता, आमा उर्मिला, आश्मा, भाई संयोग र संयम अनि पिता नारायण पुरी ।